fiber optic cable - တရုတ် HQC အီလက်ထရောနစ်
GYTA53 fiber optic cable ရဲ့နမူနာနိဒါန်းပိုမိုတိကျတဲ့, pls www.orientrack.com သွားရောက်ကြည့်ရှု 1. သံမဏိတိပ် 2. မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆဖိုင်ဘာလျှောက်လွှာနှင့်အတူသံချပ်ကာ: ဤမြှောင်းပုံသံမဏိတိပ်နှင့်လူမီနီယံတိပ်သံချပ်ကာနှင့်နှစ်ဆအိမ်မှကေဘယ်လ်ကြိုးရှိရာကြမ်းတမ်း enviroments မှာတပ်ဆင်မှုအတွက်သင့်လျော်သောများမှာ cable ကိုအပေါ်စက်မှုသက်ရောက်မှုမျှော်လင့်ထားရမည်။ EG တိုက်ရိုက် opplication သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ သူတို့ကကြွက်ခုခံလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခံရဖို့ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အစိုဓာတ်ကိုခုခံတွန်းလှန်ရှိရာပြွန်တွင်လည်းတပ်ဆင်မှုအတွက်သင့်လျော်သောများမှာ ...
FOB စျေး: ညှိနှိုင်း
Min.Order အရေအတွက်: ညှိနှိုင်း
ဆိပ်ကမ်း: Ningbo; ရှန်ဟိုင်း
GYTA53 fiber optic cable ရဲ့နမူနာနိဒါန်း
ပိုမိုတိကျသော, pls သွားရောက်ကြည့်ရှု www.orientrack.com
cable ကိုအပေါ်စက်မှုသက်ရောက်မှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိရာဤအမြှောင်းပုံသံမဏိတိပ်နှင့်လူမီနီယံတိပ်သံချပ်ကာနှင့်နှစ်ဆအိမ်မှကြိုးတွေကြမ်းတမ်း enviroments မှာတပ်ဆင်မှုအတွက်သင့်လျော်သောများမှာ မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ EG တိုက်ရိုက် opplication သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ သူတို့ကလည်းကြွက်ခုခံလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခံရဖို့ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အစိုဓာတ်ကိုခုခံလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်အဘယ်မှာရှိပြွန်ထဲမှာ installation ကိုများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
432 အမျှင်အထိ 1. ။
2. နည်းပညာ stranding အဆိုပါချောင်ပြွန်အမျှင်ကောင်းသောအလယ်တန်းပိုလျှံအရှည်ရှိသည်နှင့်ပြွန်ထဲမှာအမျှင်အခမဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုပါစေ။ ဘယ် cable ကို longitudinal စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းမဲ့နေစဉ်အခမဲ့ဖိုင်ဘာစိတ်ဖိစီးမှုစောင့်ရှောက်။
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရူးအမူးခုခံခြင်းနှင့်ကြွက်ခုခံပေး 3. မြှောင်းပုံသံမဏိတိပ်သံချပ်ကာနှင့်နှစ်ဆ PE အိမ်မှ။
4. သတ္တုအစွမ်းသတ္တိကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ strain စွမ်းဆောင်ရည်ပေးစွမ်းသည်။
ယခင်: fiber optic Adapter ကို
နောက်တစ်ခု: fiber optic Patch Panel ကို